Nyaya yokudya pamberi pemurume/mukadzi yanetsa vakawanda – Makuhwa.co.zw
“Mbuya ndodawo kubvunza nyaya inondinetsa pamoyo pangu.” Ini ndokuti bvunza hako. Zvikahi murume ari kundishungurudza nekuda kundiitisa zvinhu zvandisingazivi. Ini ndokubvunza kuti ndezveiko? Kwahi ndezvamadhimoni.
Ini ndakabvunzawo kuti sei iwe usingazvidi? Zvikahi kana murimi mbuya mungazvidawo here? Ini ndokumutsanangurira kuti pandakawanikwa ndange ndisingazvidiwo chose asi ndakazoti ndatenga rimwewo bhuku pataikonana nokuti murume aida manheru chete ini ndichidawo makuseni chete, bhuku iri rikatitsanangurira kuti Rhoji haina nguva, chero pawaitira zemo muripo mese muchikwanisa, endai muvatane. Mubhuku rimwero mange mune nyaya yokusvetana pamberi iyi, ini ndokubvunza murume kuti anofungei nayo iye ndokumbotsikatsikawo ndokuzodudza kuti anoda kungohwa kuti zvinodii. Tange tava mugore rechina taroorana pandakamuhwisa kuti zvinodii tabva mushawa.
Pamwe imbozvizama kamwe chete ugomuudza kuti hauna kunakigwa nazvo, pane kungoramba usingazivi kuti zvinodii. Tangai mageza mese kana usina shuwa iwe gezesa murume chombo, wokwevera ganda kumashure kwechimusoro chechombo, wogeza zvakanaka fungwa yako yoziva kuti haana svina. Kana murume ukamubata chombo chinobva chati twii saka haunetseki kuchigezesa. Kana musina kujaira kugeza mese, muudze kuti uchazama kana ageza. Wobva wamuudza kuti ageze zvakanaka.
continue kuverenga kupage 2…
Related Topics:Nyaya yokudya pamberi pemurume/mukadzi yanetsa vakawanda
Ndakazvambura kamwe ka slim nemboro kainge kane 23yrs